#Gary Neville wuxuu sharxay toddobada tayadood ee Maguire uu soo Bandhigay kulankiisii ugu horreeyay ee Man Utd - Get Latest News From Horn of Africa
#Gary Neville wuxuu sharxay toddobada tayadood ee Maguire uu soo Bandhigay kulankiisii ugu horreeyay ee Man Utd
Xiddiga reer England Maguire ayaa noqday daafaca ugu qaalisan abid isbuucii hore markii uu heshiis lagu soo dhameystiray 80 milyan ginni ah oo uu kaga soo dhaqaaqay Leicester City.
Wuxuu ciyaaray kulankiisii ugu horeysay ee United waa kulankii axadii aynu soo dhafneyee – iyadoo Red Devils ay 4-0 ku garaacday mid ka mid ah lixda koox ee ay xafiiltamaan.
Harry Maguire ayaa awood muuqata siiyay qeybta daafaca ee kooxda Manchester United kulankii shalay ay 4-0 kaga badiyeen naadiga Chelsea, kaasoo ay kaga daah furteen horyaalka Premier League.
Halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa si weyn u taageeray Harry Maguire, kaasoo dhowaan ku soo biiray garoonka Old Trafford.
Gary Neville ayaa bartiisa Twitterka kaga hadlay Harry Maguire, kaddib markii uu ku soo qoray qoraal uu si weyn ugu amaanay:
“Waan jecleystay Harry Maguire kulankii shalay, waa ciyaryahan madale ah ee xasiloon, inta badan wuxuu xaadir ku yahay qeybta gadaale, wuxuu ka joojiyaa kubaddaha halista ah weeraryahanada kooxaha kale”.
“In la go’aamiyo isaga waxaan filayaa inay tahay xili hore, balse wuxuu muujiyay tilmaamahan oo dhan, ma jiraan wax calaamad su’aal ah ee ku aaddan qiimaha isaga dartiis loo bixiyay”.
Yeelkadeeda, Harry Maguire ayaa ciyaaray kulankoodii ugu horeeyay horyaalka Premier League ee xalay dhex maray kooxaha Man United iyo Chelsea garoonka Old Trafford, kaasoo ay Red Divals guul ku gaartay 4-0.